Waakee xidiga ku sugan kooxda Atletico Madrid ay dooneyso Barcelona inay ka dhigato badalka Jordi Alba?? – Gool FM
Waakee xidiga ku sugan kooxda Atletico Madrid ay dooneyso Barcelona inay ka dhigato badalka Jordi Alba??
Dajiye February 22, 2019
(Barcelona) 22 Feb 2019. Wargeyka “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Barcelona ay xiiseeneyso sameynta saxiixa difaaca reer Brazil ee Filipe Luís suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Barcelona ayaa raacdo ugu jirta sida ay ku heli lahayd saxiixa xidig si wanaagsan kaga ciyaari kara difaaca garabka bidix si uu u caawiyo Jordi Alba, maadaama uu xili ciyaareedka oo dhan uu isaga oo kaliya kaga ciyaaro booskan.
Sidaas darteen saraakiisha kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa waxay dooqa koowaad ka dhiganayaan difaca reer Brazil iyo kooxda Atletico Madrid ee Filipe Luís.
Waxaase intaas sii dheer in kooxda Barcelona saxiixa Filipe Luís aysan ku bixin doonin qarashaad hadii ay dhacdo inay u dhaqaaqdo saxiixiisa, maadaama heshiiskiisa Atletico Madrid uu dhacayo dhamaadka xili ciyaareedkan.
Inkastoo ay da’adiisu tahay 33 jir hadana Filipe Luís ayaa wali bixinaya qaab ciyaareed cajiib ah, wuxuuna ku guuleystay inuu ilaashado awoodiisa jireed.
Ma ahan markii ugu horeysay ay kooxda Barcelona sameyso isku dayga ay ku dooneyso saxiixa ciyaaryahanka reer Brazil ee Filipe Luís, waxayna sidaan oo kale horey isugu dayday laba jeer, iyadoo si aad ah ugu dhawaatay in saxiixiisa ay hirgaliso sanadii 2009-kii.
RASMI: Lassana Diarra oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta
DEG DEG: Chelsea oo Ganaax wayn laga saaray Suuqa kala iibsiga....(Xaalada kooxda oo sii xumaatay)